Mee mkpọchi elektrọnik nke gị nke ị nwere ike imepe ọnụ ụzọ ụgbọala gị maka mkpịsị aka gị | Akụrụngwa n'efu
Mee mkpọchi elektrọnik nke gị nke ị nwere ike imepe ọnụ ụzọ ụgbọala gị maka mkpịsị aka gị
Anyị nọ n'oge mgbe ọ dị ka ihe kachasị nchebe ma ọ bụ ihe kachasị ọsọ bụ iji mkpịsị aka gị, dịka ọmụmaatụ, mepee ekwentị gị na ọbụlagodi ịga ọrụ, n'ọnọdụ a ihe niile na-aga site na nchekwa achọrọ ma ọ bụ nye iwu iji mezuo ụfọdụ ndị ọzọ oru ngo.
Kama nke a, eziokwu bụ na, dị ka ọrụ ngo nke ịmụ otu ụdị ngwaọrụ dijitalụ si arụ ọrụ nwere ike ịmasị karịa, n'ihi nke a taa achọrọ m ịkọwara gị esi na-efego ihe na kọmputa mkpọchi gị ụgbọala ụzọ nke nwere ike-agbachi iji mkpisiaka gị.
1 Mee mkpochi elektrọnik nke aka gi maka uzo uzo ugbo ala nke uzo i gha - emeghe site na iji akara aka gi
2 Nzọụkwụ dị mkpa iji wuo onye na-agụ mkpịsị aka gị nke ị ga-eji mepee ụzọ ụgbọala gị
2.1 Nzọụkwụ 1: Wiring na Soldering the Whole System
2.2 Kwụpụ 2: Coddebe ma na-agba ọsọ na ndị na-achịkwa ya
2.3 Kwụpụ 3: Anyị na-ezukọta ọrụ niile
2.4 Nzọụkwụ 4. Iji usoro
Mee mkpochi elektrọnik nke aka gi maka uzo uzo ugbo ala nke uzo i gha - emeghe site na iji akara aka gi
Banye n'ime ntakịrị nkọwa zuru ezu, gwa gị na maka ọrụ a, anyị ga-eji a akara mkpisiaka nyocha dị ka SparkFun GT-511C1R. Dị ka ọ dị na mbụ n'ụdị nkuzi a, ekwesiri iburu n'uche na isi ụdị ngwaahịa ndị a niile nwere ọrụ yiri ya nke mere na ọ dịghị mkpa ka ọ bụrụ ụdị a.
Ọ bụrụ n’inwe obi ike ịrụ ọrụ a mana ị nwere ụfọdụ esemokwu, dị ka nke a na-eji nyocha akara mkpisi aka dị iche na nke nkuzi ahụ ma ọ bụ na ụzọ ụgbọala gị na-eji sistemụ ndị ọzọ eme ihe, ihe ga-eme fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngụkọta enwere ike, mba gị ga-eme ihe kpatara egwu, ị nwere ike ịgbaso nkuzi ahụ mana ọ bụghị dịka ọ dị kemgbe ị ga-eme mgbanwe ndị ọzọ ma na wiring ma na koodu n'onwe ya iji gbanwee ya na ngwaike gị.
Nzọụkwụ dị mkpa iji wuo onye na-agụ mkpịsị aka gị nke ị ga-eji mepee ụzọ ụgbọala gị
Nzọụkwụ 1: Wiring na Soldering the Whole System
Iji nwee ike imeghe ọnụ ụzọ ụgbọala gị maka mkpịsị aka mkpịsị aka gị, ị ga-achọ ihe abụọ dị iche iche. N'otu aka, anyị kwesịrị rụpụta ogwe aka anyị, nke anyị ga-etinye n'èzí ụlọ anyị. Inside a akara obubọk ga-ebe anyị ga-wụnye mkpisiaka nyocha, a obere ozi na ihuenyo na ụfọdụ ndị ọzọ bọtịnụ.
Nke abụọ anyị ga-achọ wunye igbe nke abụọ n'ime ụgbọala ahụ n'onwe ya. Nke a ga-abụ onye na-ahụ maka ịchọpụta na akara mkpịsị aka abanye na ngalaba njikwa nabatara ma ọ bụ na ọ bụghị site na sistemụ na, ọ bụrụ na nkwenye ziri ezi, gaa n'ihu ịmepụta mgbaàmà nke igwe ga-emepe nke ga-emepe ọnụ ụzọ nke ụgbọala anyị.
Iji mezuo nke a anyị ga-achọ ATMega328p microcontroller onye ga - ahụ maka inye ndụ na njikwa ahụ anyị ga - arụnye na mpụga ụlọ anyị, maka panel dị n'ime anyị ga-nzọ na ATTiny. Ogwe abụọ ahụ ga-ekwurịta okwu n'etiti onwe ha site na njikọ njikọ. Iji mee ka nchebe nke usoro ihe niile dịkwuo elu, anyị ga-etinye igwe na-ebugharị ngwa ngwa ka kaadị ATTiny wee nwee ike imechi njikọ ahụ, nke mere na ọ bụrụ na onye na-emebi ihe amalite akara nchịkwa mpụga, ha enweghị ike imeghe ọnụ ụzọ ụgbọala anyị site na ịgafe eriri abụọ.
Ọ bụrụ na ọrụ a kwenye gị ma nwee mmasị n'ịrụ ọrụ a, nke a bụ ndepụta nke akụrụngwa ịchọrọ:
GT-511C1R mkpisiaka nyocha
JST njikọ maka GT-511C1R nyocha akara mkpisiaka
Voltala regulator MCP1700-3V3
10 uF capacitor (nkeji 2)
10 kOhm na-eguzogide (nkeji 3)
100 ohm resistor (nkeji 3)
Pushbutton (nkeji 3)
28 na 8 pin IC njikọta, ga-enyere chebe microcontrollers mgbe soldering ma dị mfe mmemme
Ọnụ iji jikọọ eriri ndị na-achịkwa akara na igbe dị n'ime na-enweghị mgbanye
Igbe na-enweghị mmiri maka n'èzí
AC na DC onye ntụgharị, dịka ọmụmaatụ enwere ike iji chaja ekwentị
N'oge a ọ bụ oge ijikọ akụrụngwa niile na ndepụta ahụ. Echiche ahụ, dịka ị na-eche n'echiche, na-agabiga soro eserese nke dị n’elu usoro ndị a, otu na nke ị nwere ike ịhụ nhazi nke ma ogwe njikwa na modulu ime. Otu ndụmọdụ m nwere ike inye gị bụ inye eriri nke ma onye ntụgharị ugbu a na LCD ụfọdụ ogologo ka ị nwee ike kwụgidere ha ma dozie ha n'ọnọdụ kachasị mma ị mepụtara n'ime igbe dị na mmiri.
Ọ bụrụ na n'oge a, anyị na-enyocha koodu nke onye njikwa ahụ ga-emecha mechaa, ị ga-achọpụta na mkpọchi ndị ahụ jikọtara na ntụtụ 12, 13 na 14, nke mezuru ọrụ nke 'déba','OK'na'gbada'karị. Nke a pụtara na ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche itinye ha n'ụzọ dị otú a ka ị wee nwee ike ịchekwa echiche nke ọma karịa na ọrụ ha.
Inye ugbu a na usoro niile anyị ga-eji, dị ka ndepụta nke ihe ndị dị mkpa kwuru, chaja ekwentị na njikọ microUSB ọ bụla. Echiche nke iji ụdị chaja a na-emeghachi n'eziokwu na ha dị oke ọnụ ma karịa ihe niile dị mfe ịchọta.. Ọzọ dị iche iche echiche bụ inwe ike ike ndị na-achịkwa site na iji batrị, ọ bụ ezie na n'oge a ọ ga-akacha mma iji onye ntụgharị ugbu a na-agbanwe ugbu a ebe ọ bụ na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na-erepịakwa ọtụtụ ihe dị ugbu a na, na-eri usoro niile na batrị nwere ike na ị ga-agbanwe ha kwa ụbọchị.
Kwụpụ 2: Coddebe ma na-agba ọsọ na ndị na-achịkwa ya
N'oge a akpan akpan agwa gị na edeela koodu nke ATMega328p na ATTiny85 ga-egbu ma chịkọta ya na Arduino IDE. N'okwu a kapịrị ọnụ, anyị ga-egbu faịlụ garagefinger.ino na ATMega328p na obere faịlụ_switch.ino na ATTiny85. N'aka nke ọzọ, ụlọ akwụkwọ NokiaLCD.cpp na NokiaLCD.h bụ ọba akwụkwọ abụọ maka ihuenyo LCD, a chịkọtara ha site na ihe atụ ewepụtara na saịtị Arduino yana, dịka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ ọ bụla, a ga-etinye ha na folda 'ulo akwukwo'ka Arduino IDE gị chọta ha. Mpempe akwụkwọ a na-esitekarị na mgbọrọgwụ ebe ị rụnyere IDE, na Windiows ọ na-abụkarị "% HOMEPATH" \_ Documents \_ Arduino \_ ọba akwụkwọ. M na-ahapụrụ gị faịlụ maka nbudata n'okpuru usoro ndị a:
Na mgbakwunye na nke a ị ga-achọ ọba akwụkwọ ka akara mkpisiaka nyocha rụọ ọrụ. N'oge a ọ ghaghi iburu n'uche na ọ dị mwute Ọba akwụkwọ adịghị na saịtị SparkFun agaghị arụ ọrụ dịka e mepụtara maka usoro GT-511C3, dị oke ọnụ karịa, ọ bụghị maka ụdị anyị na-eji, ikekwe ihe siri ike nchọta ma dị ọnụ ala karịa. Enwere ike ịchọta ọba akwụkwọ na-arụ ọrụ maka GT-511C1R na github.
Ọ bụrụ na ibudata faịlụ niile ma lelee koodu ịchọrọ nye nchebe ka ukwuu na usoro ahụ M na-agba gị ume, dịka ọmụmaatụ, ịchọta na dochie ihe niile a 'nzuzo'site na paswọọdụ gị Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị nke nwere ike inye aka mee ka sistemụ gị nwee nchedo na-agbanwe agbanwe agbanwe na obere faịlụ_switch.ino ka ọ bụrụ otu ogologo dị ka paswọọdụ ịchọrọ iji.
Mgbanwe overryde koodu, akọwapụtara na faịlụ garegefinger.ino, nwere ihe ngosi 8-bit nke usoro pịa elu / ala pịa enwere ike iji mepee ụzọ mpasa ụgbọ ala gị ma bulite mkpịsị aka ọhụrụ na sistemụ na-enweghị iji akara mkpịsị aka ama ama. Nke a bara uru maka oge mbụ ejiri ngwaọrụ ahụ dị ka ebe nchekwa nyocha ga-efu. O nwere ike ịbụ ihe na-atọ ụtọ ịgbanwe uru mbụ a.
Kwụpụ 3: Anyị na-ezukọta ọrụ niile
Ozugbo anyi nwalechara oru nile, oge eruola maka nzuko ikpeazu. Maka nke a, anyị ga-emerịrị igwe njikwa ahụ niile n'ime igbe mmiri mmiri anyị. Dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo a, ka onye ọ bụla ghara ịnweta onye njikwa ahụ, na mgbakwunye na igbe mgbochi mmiri, ejirila igbe acrylic nke anyị ga-awụnye ihuenyo LCD na bọtịnụ nnweta, usoro ndị ọzọ ga-abụ arụnyere n'ime igbe a.
A ghaghị itinye igbe a n'èzí ụlọ gị ma jikọọ na igbe ebe anyị ga-etinye ATTiny. N'oge a, na-echetara gị na na ATTiny ị ga-ejikọ eriri iji kpọtụrụ akara ngosi na moto nke na-emepe ụzọ ụgbọala gị. N'okwu m, ọ dịịrị m mfe ebe ọ bụ na n'ime ụgbọala ahụ n'onwe ya enwere m bọtịnụ na mgbidi nke rụrụ otu ọrụ a.
Nzọụkwụ 4. Iji usoro
Ozugbo anyị wụnyechara usoro ihe niile, anyị ga-agbanye bọtịnụ atọ ọ bụla iji gosipụta ihuenyo LCD na nyocha mkpịsị aka. N'oge a, ngwaọrụ ahụ na-echere ruo mgbe itinye mkpịsị aka na nyocha. Ọ bụrụ na mkpịsị aka ị debere na nyocha ahụ amata, ọnụ ụzọ ahụ ga-emeghe ma a menu ga-egosipụta na ihuenyo imeghe / mechie ọnụ ụzọ ọzọ, gbakwunye / hichapụ mkpịsị aka, gbanwee ncha ihuenyo ... Ngwaọrụ ahụ gbanwere banyere 8 sekọnd mgbe igodo ikpeazụ mechara. Ka ịgbanwee oge nke oge nchere, ị ga-agbanwe ọrụ ahụ chereBorton na faịlụ garagefinger.ino.
Dịka anyị kwuburu na paragraf ndị gara aga, ịnwere ike iji usoro kpochapụ site na iji akara elu na ala sotere 'OK'iji nweta usoro. Nke a bara uru na oge izizi ị gbanye ngwaọrụ dịka, n'oge a, nyocha ahụ agaghị enwe akara mkpịsị aka na ebe nchekwa ya. A na-enye usoro izizi site na ọnụọgụ ọnụọgụ 8-bit nke ọnụọgụ nke echekwara na agbanwe kpachieCode na faịlụ garagefinger.ino ebe '1' na-anọchi anya bọtịnụ 'elu' na '0' na-anọchi anya bọtịnụ 'ala'.
Otu ihe ị ga-eburu n'uche bụ na ọ bụrụ na ị gbanwee usoro ngbanwe wee mechaa chefuo ya na-agbakwunye mkpịsị aka gị na ngwaọrụ ahụ, a ga-ekpochi ngwaọrụ ahụ nke ọma na ị ga-edegharị ATMega328p ma mee ka EEPROM hichapụ koodu .
Ozi ndi ozo: ndị nkụzi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Mee mkpọchi elektrọnik nke gị nke ị nwere ike imepe ọnụ ụzọ ụgbọala gị maka mkpịsị aka gị
Otu esi eme robot: 3 dị iche iche nhọrọ
Arduino Yún, bọọdụ iji banye na ofntanetị nke Ihe n'efu